Terms of Service « Tusaalo.com Terms of Service – Tusaalo.com
Kusoo dhawaada tusaalo Productions
Waad ku mahadsan tahay isticmaalka iyo soo booqashada web-ka tusaalo Productions, halkan waxad kala socon kartaa isticmaalka iyo shuruudaha u dagan webka, fadlan si daganaan ah u aqri kadibna ogolow shuruucda u dagan webka tusaalo Productions.
Shuruucda Su’aalaha & fikradaha (Comments-ka)
Waxaa mamnuuc ka ah webka tusaalo.net in aad ku cayso shaqsi, shirkad, qabiil ama wadan, hadii ay intaas kamid tahay comments gaaga aynu ku lifaaqan yihiin intaa soo sheegnay marnaba makama soo dhex muuqan doono meesha aad comment-ga ku soo qortay.
Waxaa kaloo ka mamnuuc ah in aad film kusoo dalbato qeybta fikradaha, hadii comment gaaga uu ku jiro magac filim, sidoo kale maka soo dhex muuqan doono meesha aad comment-ga kusoo qortay.
Fadlan hadii aad filim dalbaneyso ama aad qabto su’aal anaga dhankeena ah ama ku saabsan webka waxaad nagala soo xiriiri kartaan Contact Us.
Ma ahan in aad nagula soo wadaagto qeybta fikradaha ama Comments.
Shirkadda tusaalo Productions waa mid ku xiran register-na ka ah xarunta Digital Millennium Copyright Act.
Dadweynaha soo booqda webkan si sharci ah ayay ku daawan karaan balse copy sharci daro ah waa mamnuuc, Haddii ay dhacdo in si sharci daro ah loo isticmaalo waxyaabaha “Contents” web-ka tusaalo.net ku bandhigan shuruucda Copyright ka u taal ayaa waxaa ah in ay kaa xanibeyso waxa copy ga sharci darada ahaa ee aad isticmaashay iyadoo digniin usoo diri doonto account kaaga ama meesha aad kusoo bandhigtay. Hadii ay dhacaan in mar 2aad ama 3aad isticmaasho waxaa dhici kara in ay si dhan ah “Complete” ay u xanibto account-kaaga social, video ama web host-gaaga.
tusaalo Productions mas’uul kama noqon karto xanibka ku yimaada Social, Video ama Web Host-gaaga maxaa yeelay shuruucda copyright ka iyaga ayaa wax xaniba.